Bokin' i Jôela - Wikipedia
Bokin' i Jôela
Ny Mpaminany Joela, nataon'i Michelangelo, taona 1508- 1512.
Ny Bokin' i Jôela na Bokin' i Jôely dia boky ao amin’ ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Iray amin’ ireo atao hoe "mpaminany madinika roa ambin'ny folo" izy. Tetezamita mampitohy ny faminaniana israelita sy ny apokaliptika jiosy ny Bokin’ i Jôela. Ny boky dia mitantara ny fahorian' ireo Jiosy nody ao Jodà avy any am-pahababoana, sy mirakitra ny faminanian' i Jôela (na Jôely) izay mitaona ny vahoaka hibebaka sady mampanantena azy ireo fahasambarana ho avy amin' ny Andron' i Iahveh.
1.1 Ny fotoana nanoratana
3.1 Fibebahana marina amin' Andriamanitra no hahafaka ny loza (1.1 – 2.27)
3.2 Hotahina i Joda ary homelohina ireo fahavalony (3.1 – 4.21)
Ny mpanao heviteny dia saika miray hevitra fa manodidina ny taona 400 tal. J.K. no nanoratana ny Bokin' i Jôela. Porofon' izany ny fampiasana ny hoe "i Jodà sy i Jerosalema", ny firesahana ny amin' ireo Jiosy any am-pielezana sy ny Grika, ny fampiasana lahatsoratra avy amin' ireo boky heverina fa voasoratra taoriana kokoa ary ny toetsaina mifantoka amin' ny fanompoam-pivavahana. Ny fisian' ny lohahevitra apôkaliptika hita ao amin' ny toko faha-3 sy faha-4 dia manohana koa izany faminavinana ny fotoana heverina fa nahavitan' io boky io izany satria ny lohahevitra eskatôlôjika dia mampiavaka ireo mpaminany taty aoriana.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר יוֹאֵל / Sefer Yô’ēl ny Bokin' i Jôela. Ao amin' ny Septoajinta amin' ny teny grika izy dia atao hoe Ἰωήλ Δʹ / IV Iôêl (ny delta Δʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahatelo azy).
Azo zaraina roa ny Bokin' i Jôela:
Fibebahana marina amin' Andriamanitra no hahafaka ny loza (1.1 – 2.27)[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny fizaràna voalohany, ny mpaminany dia manoritsoritra ny fanimbana nataon' ny haintany sy ny valala tao an-tanàna izay niteraka fisaonana sy fitalahoana. Nitaona ny vahoaka hifady hanina tao amin’ny tranon’ i Iahveh (Jehovah) sy hivavaka amin’Andriamanitra mba hahataperan’ny loza ny mpaminany. Fambara am-panoharana ny hahatongavan’ny Andron’ i Iahveh na ny Andron' ny fitsarana izany loza izany, hoy ilay mpaminany, ka fibebahana no hahavonjy azy ireo. Raha mibebaka izy ireo dia hamono ny valala no sady hahatonga ny tany hahavokatra tahaka ny taloha ary hanao izay hahavoky ny vahoakany i Iahveh. Amin’izay ny vahoaka hahalala fa eo afovoan’ i Israely i Iahveh.
Hotahina i Joda ary homelohina ireo fahavalony (3.1 – 4.21)[hanova | hanova ny fango]
Ao amin’ ny fizaràna faharoa dia miova ny fomba fijery. Tsy zavatra azo tsapain-tanana mivantana no voaresaka fa ny amin’ny fiafaran’izao tontolo izao izay anoritsoritan' ny boky ny hahatongavan’ny Andron' i Iahveh sy ny tontolo vaovao. Maminany i Jôela fa ho tonga ny fotoam-panafahana, izay hanaparitahan’ Andriamanitra ny Fanahiny ho amin’ ny nofo rehetra. Hisy famantarana eny amin’ny lanitra ary hanafika an’i Jerosalema ny firenena jentilisa izay hiangona ao amin’ny "lohasahan' i Jôsafata" dia ilay lohasaha hitsaran’ i Iahveh ny azy ireo. Rehefa afaka izany dia hahagaga ny fahavokaran’ ny tany ao amin’ i Palestina voaova. Hisy rano miboiboika hiditra ao amin’ ny Tempoly, ao Jodà sy ao Ziôna vaovao.
Jôela na Jôely
Mpaminany madinika roa ambin’ ny folo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Jôela&oldid=1041925"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 05:53 ity pejy ity.